किन सुत्न बेलामा मेकअप लगाएर नसुत्ने ? - नेपाली खोज
किन सुत्न बेलामा मेकअप लगाएर नसुत्ने ?
मेकअप लगाएर सुत्ने गर्नु भएको छ ? चाहे त्यो बिर्सेर होस्, बाध्यताले होस् वा थकानले, मेकअप लगाएर सुत्नु पटक्कै राम्रो होइन। मेकअपको बाक्लो लेअर अनुहारमा लगाउनु राम्रो बानी होइन। लामो समय यस्तो मेकअप छालामा राखिराख्दा छालाले वातावरणबाट पाउने अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक रसायन लिन सक्दैन। जसले छाला चिलाउने, पोल्ने हुन्छ।